Sideen U Furi Karaa Xisaab Ganacsi Pinterest? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Waxaa laga yaabaa 12, 2021 0 comments 532
Waa wax iska caadi ah dadku inay rabaan inay lahaadaan koonto Pinterest shaqsi ah si ay u siiyaan macno fiican wax kasta oo ay ku qabanayaan barxadda dhexdeeda. Taasi waa, in la qaato fikradaha qurxinta ama sidoo kale loo baahiyo mashaariicdaada si shaqsi ah sida habka isku xirka.
Si kastaba ha noqotee, shirkadaha waaweyn sidoo kale waxay fursad u leeyihiin ku abuuri boggaaga gaarka ah Pinterest taasi waxay siineysaa faa iido weyn fikradda ku xirnaanta isticmaaleyaasha. Wax walba waxaa loogu tagi doonaa gacanta kuwa maareeya qaybta xayeysiinta ee shirkadda ama xitaa qofka maareeya shabakadaha.
Haddii shirkadi rabto inay isku koobto shirkadaha badankood, markaa waxay ka koobnaan karaan fikrado toosan si loo gaaro faa'iido weyn. Halkaas ayay ka sii eegaan karaan waxa ay doonayaan iyo raadso isticmaaleyaasha ama macaamiisha iyo xitaa helitaanka iibsadayaasha alaabada ama adeegyada.
Tallaabooyinka lagu furayo koonto ganacsi Pinterest
Sida dhammaan bogagga, Pinterest waxay abuurtay qayb loogu talagalay shirkadaha taas oo meelahaas fursad u siinaysa inay ku abuuraan fikradahooda xayeysiis madasha. Xaqiiqdii waa fikrad cajiib ah oo dadka siinaysa awood ay ku helaan alaabada dhabta ah badhanka guji.
Pinterest waxay hagaajisay awoodeeda isku xidhka dadka iyadoon talaabooyin badan laga qaadin bogga. Laakiin dhab ahaan, wax walba waxay ku xirnaan doontaa sida shirkad kastaa ay u qaadato koorsadeeda wada hadal.
Sidee loo furaa koonto ganacsi Pinterest?
Xidh galitaanka koontada shaqsiyeed
Raadi: "Kulan loogu talagalay xisaabaadka ganacsiga ee Pinterest"
Dhig xogta la codsaday barxadda dhexdeeda
Ha iloobin inaad ku darto: boggaaga si aad u abuurto xiriiriye, waddanka ay shirkaddu ku taal, luqadda ay kula xiriiraan madasha.
Kadib waa inaad aqbasho shuruudaha oo aad gujiso bogga xiga ee bogga
Xooga saar meheraddaada hal meel waana inaad siisaa si aad u aqbasho
Waad dhigan kartaa haddii aad rabto inaad dhiirrigeliso alaabada ama adeegyada
Ugu dambeyntii waxaad abuuri kartaa biin ama waxaad si fudud ugu wareegi kartaa koontada ganacsiga
Mid ka mid ah waxyaabaha kaa caawin doona inaad ku dhex milmato bogga laftiisa ayaa ah awooda inaad kula xiriirto dadweynaha adoo abuuraya biinanka. Kuwani shaki la’aan waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha soo gaabinaya masaafada ay dadku doonayeen.
Maxay muhiim ugu tahay koontada ganacsi Pinterest?
Si aad uga dhigto bogga Pinterest mid ka sii wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in ay jiraan xaqiijin shirkadaha. Shaki la'aan tani waxay yareynaysaa suurtagalnimada khiyaanooyinka shabakadda gudaheeda oo markaa waxay muujinayaan macluumaad gaar ah.
Maanta, bogagga waxay ka dhigi karaan daabacaaddooda isku darka dallacsiinta si ay u gaaraan dabaqado kale. Si kastaba ha noqotee, talaabooyinkan oo dhan waxay u baahan yihiin in si sax ah loo sameeyo iyo dhab ahaan xariiq cinwaan cayiman.
Marka la eego waxaas oo dhan, sameynta koonto Pinterest waxay soo saari kartaa waxa ugu fiican dhammaan dhinacyada isgaarsiinta si loo helo suuq ballaaran, wax kastoo dhagaystayaasha ah.
1 Tallaabooyinka lagu furayo koonto ganacsi Pinterest
1.1 Sidee loo furaa koonto ganacsi Pinterest?
2 Maxay muhiim ugu tahay koontada ganacsi Pinterest?